Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Norvezy » Nanameloka 2,352 $ ny praiminisitra norveziana noho ny fandikana ny lalàna COVID-19 azy manokana
Erna Solberg dia nanjary ohatra iray satria izy no nitarika ny fameperana henjana,
Ny mpitondra norveziana dia nandoa onitra noho ny fanitsakitsahana ny lalàna manalavitra ny koronavirus
Naharihary tamin'ny fampahalalam-baovao ao amin'ny firenena ity antoko ity, ka nahatonga azy ireo ho hitan'ny polisy
Apetraka tsara mba hitazomana ny fahatokisan'ny besinimaro ny lalàna mifehy ny fameperana ara-tsosialy
NorvezyNy praiminisitra Erna Solberg dia nampandoavina onitra satro-boninahitra 20,000 Norvezy ($ 2,352) noho ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fitsipaham-piaraha-monina mahery vaika napetraky ny governemantany.
Raha ny voalazan'ny sefon'ny distrikan'ny polisy atsimo atsinanana dia napetraka tamin'ny praiminisitra ny sazy noho ny fikarakarana fivoriam-pianakaviana hankalazana ny faha-60 taonany.
Raha amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fandoavana sazy dia fihetsika an'ohatra nefa tsy hampiharina, dia natao ohatra i Erna Solberg satria izy no nitarika ny fameperana henjana ho azy, hoy ny lehiben'ny polisy.
“Marina noho izany ny famoahana onitra mba hitandrovana ny fahatokisan'ny besinimaro ny lalàna mifehy ny fameperana ara-tsosialy,” hoy ny tompon'andraikitra amin'ny polisy.
Ny fivoriana - voalaza fa antoko sushi - dia natolotry ny praiminisitra tamin'ny volana feb. Solberg dia nanao ny fety niaraka tamina fianakaviana 13 tamina toeram-pitsangatsanganana an-tendrombohitra, na dia nandrara ny fivorian'ny olona mihoatra ny 10 aza ny governemanta mba hampiadana ny fihanaky ny virus coronavirus.
Vetivety dia naharihary tamin'ny fampahalalam-baovao ao amin'ny firenena ity antoko ity, ary nasongadin'ny polisy izany. Tsy nanandrana nandà ny fandraisany anjara i Solberg, ary namoaka fialantsiny avy hatrany.
"Miala tsiny aho fa nandika ny lalàna [virus] corona izahay sy ny fianakaviako - tsy tokony ho nisy izany," hoy i Solberg nanoratra tao amin'ny Facebook fotoana fohy taorian'izay. "Mazava ho azy fa tokony hanaraka ny tolo-kevitra rehetra isika, araka ny nangatahiko anao."
Ny sasany voarohirohy tamin'ilay hetsika tsy nety, anisan'izany ny trano fisakafoanana nampiantrano ny fety, ary koa ny vadin'ny PM, Sindre Finnes, dia tsy niatrika vokadratsy. Na dia hita fa meloka tamin'ny fandikana ny lalàna aza izy ireo, dia ny praiminisitra ihany.
"Solberg no mpitondra ny firenena, ary izy no lohalaharana tamin'ny fameperana natao mba hamerana ny fihanaky ny viriosy," hoy ny lehiben'ny polisy.
Ny hetsika fifampiraharahana amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mirakitra fitomboana 40.3% tamin'ny martsa 2021